Nemanja Matic Oo Daboolka Ka Qaaday Wixii Uu Fernandes Ciyaartoyda Manchester United U Sheegay Markii Uu Sameeyey Qaladkii Rikoodhaha Loogu Dhigay West Brom - Gool24.Net
Nemanja Matic Oo Daboolka Ka Qaaday Wixii Uu Fernandes Ciyaartoyda Manchester United U Sheegay Markii Uu Sameeyey Qaladkii Rikoodhaha Loogu Dhigay West Brom
Nemanja Matic ayaa daboolka ka qaaday wixii uu Bruno Fernandes sida degdegga ah ugu sheegay markii uu sameeyey taakalkii uu ku qabtay Conor Gallagher ee rikoodhaha loogu dhigay West Brom.
Garsoore David Coote ayaa rikoodhe siiyey West Brom daqiiqaddii ugu horreysay ee markii laga soo laabtay waqtiga nasashada, waxaana go’aankan ka dooday Manchester United oo dalbaday in VAR looga soo fiiriyo xilli ay muuqanaysay in lugta Fernandes aanay gaadhin Gallagher oo isaguna si sahal ah dhulka iskugu tuuray.
VAR oo laga soo daawaday ayaa meesha ka saartay rikoodhahaas, isla markaana ku raacday ciyaartoyda Manchester United dooddoodii ahayd in dhacdo rikoodhe sababtaa aanay jirin.
Red Devils ayaa iyagana la siiyey rikoodhe markii uu Darnell Fulong gacanta ku qabtay kubbad, taas oo uu gool u beddelay Bruno Fernandes.
Matic oo la hadlay MUTV kaddib ciyaarta ayaa daboolka ka qaaday ereyadii uu Bruno Fernandes ku yidhi markii uu qaladka rikoodhaha sameeyey, waxaanu yidhi: “Bruno wuxuu si toos ah iigu sheegay inuu kubadda taabtay markii hore. Garsooraha ayaa rikoodhe siiyey iiyaga laakiin VAR ayaa joogtay oo aragtay, go’aankana saxday. Waa sababtaas midda dadku u samaysteen VAR, si loo yareeyo qaladaadka isla markaana go’aamo sax ahi usoo baxaan.
“Aniguna waxaan u malaynayay in aanay rikoodhe ahayn, waanan ku farxay markii laga laabtay.”
Guushan ayaa ahayd middii ugu horreysay ee Manchester United ay ku gaadho garoonkeeda Old Trafford xili ciyaareedkan, waxaase uu Matic rumaysan yahay inay ahayd mid ay ku dhibaatoodeen, sababtoo ah roikoodhaha ku celiska ah ayaa isaguna ahaa mid halistiisa lahaa.
“Maaha wax fudud in marka aad laagato rikoodhaha hore ee uu goolhayuhu laynka ka baxo, mar kalena aad tooganayso. Waxaan ku faraxsanahay in Fernandes uu feejignaantaas lahaa.” ayuu yidhi Matic.